Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Qatar Airways na-akwado Nzukọ Ọchịchị Kwa Afọ 54 nke Arab Air Carriers' Organisation na Doha
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Qatar Airways na-akwado Nzukọ Ọchịchị Kwa Afọ 54 nke Arab Air Carriers' Organisation na Doha.
Mkpokọta ala ala na-akpọkọta ndị isi nke ndị ọrụ ụgbọ elu ndị otu na-ebute oge mmekorita ọhụrụ maka ndị na-ebu ụgbọ elu Arab ka COVID-19 na-atụgharị ghọọ ọrịa.
Nzukọ izugbe nke afọ 54 nke Arab Air Carriers' Organisation bụ AACO AGM izizi n'ime mmadụ kemgbe ọrịa COVID-19.
Onye isi otu nke Arab Civil Aviation Organisation, Director General for Mobility and Transport/European Commission, na Director General nke IATA na-ekerekwa òkè na mmemme dị ịrịba ama a.
Ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na-agagharị ụfọdụ ọnọdụ ahịa na-ejighị n'aka na-akpata site na ọrịa COVID-19, ọ dịtụbeghị oge dị oke egwu iji gbakọta ọnụ dị ka olu dị n'otu na ụzọ mgbake.
Qatar Airways na-anabata ndị isi ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ụgbọ elu mba ụwa na mpaghara, ndị na-emepụta ụgbọ elu na ndị isi ụgbọ elu si gburugburu ụwa gaa Doha ka ọ na-akwado 54.th Nzukọ Mgbakọ Kwa Afọ (AGM) nke Òtù Ndị na-ebu ụgbọelu Arab (AACO).
Ihe omume dị ịrịba ama bụ nke mbụ n'ime mmadụ AACO AGM kemgbe ọrịa COVID-19. A na-akwado ya n'okpuru nkwado nke Onye isi ala Mr. Jassim bin Saif bin Ahmed Al Sulaiti, onye minista na-ahụ maka ụgbọ njem nke steeti Qatar, na na òkù nke Onye isi oche Mr. Akbar Al Baker, onye isi ndị isi otu nke Qatar Airways.
Mgbakọ a dị mkpa ga-ahụ ndị na-eme mkpebi ụgbọ elu - gụnyere ndị isi oche nke ụgbọ elu ndị otu - gbakọtara ụbọchị atọ, site na 10-12 Nọvemba 2021, iji kparịta nsogbu ụgbọ elu dị na mpaghara ahụ, gụnyere ihe ịma aka na mmetụta nke COVID-19. dị ka ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ maka nchekwa, nchekwa, na-adigide malite na mgbake nke ụgbọ elu ngalaba.
Qatar Airways Onye isi otu, Onye isi ala Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ebugharị ụfọdụ ọnọdụ ahịa na-ejighị n'aka na-esite na ọrịa COVID-19, enwebeghị oge dị oke egwu ịbịakọta ọnụ dị ka a. olu dị n'otu na ụzọ mgbake. Ya mere Qatar Airways dị mpako ịnabata ndị 54th AACO AGM - ikpo okwu maka mpaghara mpaghara Arab nke ndị na-ebu ụgbọ elu iji hụ na ụlọ ọrụ anyị si na nsogbu a na-enwetụbeghị ụdị ike siri ike karịa mgbe ọ bụla. "
Onye odeakwụkwọ AACO, Mr. Abdul Wahab Teffaha kwuru, sị: "Mgbe otu afọ na ọkara nke ọgba aghara a na-atụghị anya ya kpatara nke ọrịa Covid-19 kpatara nke metụtara akụkụ niile nke ndụ, ọ dabara nnọọ adaba na anyị ga-ezute maka Mgbakọ Ọgbakọ nke 54th nke AACO n'afọ a. kwuputa na ele ụgbọ elu anya dị ka isi ihe na-enye aka na uto akụ na ụba na imepụta ọrụ. Ekele m na ekele m na-agakwuru onye isi ala Jassim bin Saif bin Ahmed Al Sulaiti maka inye nkwado ya na Mgbakọ Nzuko a na Mazị Akbar Al-Baker maka ịnabata Mgbakọ a na ezigbo ọbịa nke anyị na-enwe mgbe niile na steeti Qatar. ya na onye ọbịa anyị Qatar Airways. "